Kachin Duwa: ဒီမနက် ၀င်လာတဲ့ လိုင်ဇာမှ အီး သတင်းပါ။
သူငယ်ချင်းတို့ ကောင်းတဲ့ နံနက်ခင်းဖြစ်ပါစေ။ ခင်များတို့အားလုံး ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးလို့ လိုင်ဇာလဲ ကျန်းမာလျှက်ပါ။ မနေ့ ခရာဘွမ်မှာ ဂျက်လေယဉ် နှစ်စင်း နဲ့ မိုးချုပ်ထိ လေးခါ လာပစ်တယ်။ ဗုံးတွေ အများကြီးကျဲချသော်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာ အခုတလော မြစ်ကြီးနားက ဖမ်းပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ ကချင်လူငယ် ၄၀ ယောက်ပါလာကြောင်းသိရပါတယ်။
တစ်ယောက်က ဒဏ်ရာရပြီး သေခါနီး ပြောပြ သွားတာက မြစ်ကြီးနား ကျွန်းပင်သာ ရပ်ကွက်က မွေဂျန်သား (Mwijang Kasha) ဖြစ်ကြောင်းသာ ပြောပြီး ဆုံးသွားတယ်။ အခု လက်ရှိ ၀ိုင်းမော်မြို့ ရဲစခန်းမှာ အယောက် ၆၀ ဖမ်းချုပ်ထားတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ မနေ့က ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကိုတော့ သူ့ဆရာမ အာမခံ ပြီး ပြန်ခေါ်ထုတ်သွားတယ် လို့ ကြားပါတယ်။
အခုလဲ မြစ်ကြီးနားမှာ ညတိုင်း ကချင်ရပ်ကွက်တွေမှာ လိုက်ဖမ်းနေတယ် လို့ ကြားသိရပါတယ်။
Myitrum Manang ni, Good Morning yaw. Yawng akyu jawm hpyi ai hte mana LZ hkam kaja nga ai. Majan shiga gaw, mani Hkayabum de Jet2hkawng rai, jan du ten du hkra4lang bat nna, bom jahkrat bun ma timung hpa n ra ai; Shawnglam majan pa de ya hte MKA kaw hkan rim woi la ai, Jinghpaw ramma ni 40 hpe dat dat ai lam teng ai. Hkayabum majan paesi hkyen hkyen re ai Jinghpawma 1 hpe anhteahpyenla ni san yu yang, MKA, Chyunpinta na Mwijang kasha re ngu tsun nna si mat wa sai; ya Waingmaw Pyada dapemarai 60 jan naw rawng da ma ai;mani jawngma 1 hpe gaw shiasarama sa hkam la nna, lawt wa sai; shiga ni na lu ai yaw. Ya mung MKAeshana shagu rim tik tik naw re ai da.